Wararka Maanta: Arbaco, July 10, 2013-Wadahadalladii Dowladda Soomaaliya iyo Somaliland uga socday Turkiga oo lasoo gabgabeeyay iyo Qodobbo laga soo saaray
Qodobbada la isku afgartay oo ahaa saddex qodob ayaa waxaa ka mid ahaa in la sameeyo guddi ka kooban labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somaliland ay maamulaan hawada Soomaaliya, kuwaasoo saldhig ka dhigan doona magaalada Hargeysa.
Sidoo kale, guddiga labada dhinac waxay isku afgarteen in wadahadallada lasii wado lagana ilaaliyo wax walba oo caqabad ku keeni kara iyo in 120 maalmood gudahood ay isugu yimaadaan shir kale.
“Heshiis ayaan gaarnay innaga iyo guddigii Somaliland ka socday, qodobbo dhowr ah ayaana ku hehsiinnay, kuwa kale oo aan la isku afgaranna waxaa loo dhigay shirarka dambe in laga hadlo. Waxaana isla garanay inaan dib ugu laabanno wadatashiyo mar kalena la isku yimaado,“ ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka Soomaaliya, C/kariin Xuseen Guuleed oo warbahainta la hadlay kulanka kaddib.
Wasiirka ganacsiga Somaliland, Maxamed C/llaahi Cumar oo isna saxaafada la hadlay aya sheegay inay labada dhinac isku afgarteen qodobbadii laga hadlay qaarkood sida maamulka hawada Soomaaliya, waxaana isla garanay in lasii wado wadahadalada qodobbada aan la isku afgaranna shirarka kale looga hadlo.
“Labada geesood walaalnimo ayaa ka muuqatay intii wadahadalladu socdeen iyo inay diyaar u yihiin in wadahadalladu sii socodaan, qodobbadii maanta la isla garan waayayna wadatashiyo kaddib looga hadlo shirarka soo socda,” ayuu yiri wasiirka ganacsiga Somaliland.
Qodobbada la isku mari waayay ayaa waxaa ka mid ah in shirarka labada dhinac ee dibadda lagu qabanayo in loo wareejiyo gudaha dalka sida in lagu qabto Muqdisho ama Hargeysa iyo qodob kale oo ku saabsanaa midnimada Soomaaliya.
Wadahadalladan oo ahaa wajigii labaad oo dhinaca Somalia iyo Somaliland ay ku yeeshaan dalka Turkiga ayaa waxay qayb ka ahaayeen qorshayaal lagu doonayo in dhinacyadan ay uga hadlaan ayaaha mustaqbalkooda.